Simban’ny orinasa BTP iray ny taribin-jiro eny Ambodin’Isotry | NewsMada
Simban’ny orinasa BTP iray ny taribin-jiro eny Ambodin’Isotry
Tapaka ny jiro teny amin’ny manodidina an’i 67 ha ny alin’ny alarobia 16 janoary teo. Nijery ifotony teny Jirama, omaly maraina, ary hita fa nisy taribin-jiro vaventy sady mafy sy matanjaka (mitondra herinaratra 5.000 Volts) milevina anaty tany tapaka eny Ambodin’Isotry, mamatsy herinaratra ny tobi-paritra laharana 356. Mamatsy herinaratra toerana maromaro ity tariby matanjaka ambanin’ny tany ity, toy ny ampahany eny Ambodin’Isotry, 67 ha Avaratra-Atsinanana, Coum sy ny manodidina.
Nambaran’ny tale teknika ny herinaratra Antananarivo (DTEA), Ralaivaoalandreo Eloi Alphonse, fa nanimba ity tariby vaventy ity, ny fitaovana mitrongy tany an’ny orinasa amin’ny asa vaventy (BTP) iray, miasa eny amin’iny Ambodin’Isotry iny, ankehitriny, nahatonga izao fatapahan-jiro izao.
Manoloana izany, niasa, nanomboka omaly alina, ny teknisian’ny Jirama, satria sady ahitana tsena ihany koa eo amin’ilay toerana. Tsy maintsy tapahina anefa ny lalana eo aminy hatreny amin’ny kaomisaria 67 ha. Hoezahina hiverina amin’ny laoniny, anio zoma maraina,ny herinaratra. Manamarika ny Jirama, fa mety hosoloina tariby mihantona amin’ny andrin-jiro ny famatsiana raha toa ka tsy afaka alaina ao ambanin’ny tany ireo tariby, noho ny halalin’ny tany sy ireo trano miorina eo ambony. Mampatsiahy ny orinasa tsy miankina, miasa toy izao, ny Jirama, hampandre azy ireo mialoha, mba hanoroana ny drafitry ny famatsian-jiro amban’ny tany, toy izao.